ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့မှာ X20 Plus UD ကိုတရားဝင်ဖော်ပြတော့မယ့် Vivo! – AsiaApps
January 23, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့မှာ X20 Plus UD ကိုတရားဝင်ဖော်ပြတော့မယ့် Vivo!
Vivo အနေနဲ့ Under-diplay fingerprint feature ပါဝင်တဲ့ X20 Plus version ကို မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့တဲ့ CES ၂၀၁၈ မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Fingerprint ပါဝင်တဲ့ X20 Plus version အသစ်ကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ဖော်ပြသွားတော့မှာပါ။ Version အသစ်ရဲ့အမည်ကိုတော့ X20 Plus UD (Under-display) လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
A rumored image of X 20 plus UD
It would be launching as Vivo X20 Plus UD. Today, Vivo has officially confirmed that the Vivo X20 Plus in-screen fingerprint variant will be unveiled to the world on Jan. 24.
X20 Plus UD ကိုတရားဝင်ဖော်ပြမယ့်နေရာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပေကျင်းမြို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ UD ရဲ့ ဖုန်းအရွယ်အစားက ၆.၄၃ လက်မရှိနေပြီး CPU အပိုင်းကတော့ ၆၆၀ Snapdragon ပါဝင်ပါတယ်။ Dual camera ဖြစ်ပြီး 12MP နဲ့ 5MP ပါဝင်ပါတယ်။ Android 7.1.2 Nougat OS နဲ့လာမှာဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီကတော့ ၃,၈၀၀ mAh ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ X20 Plus နဲ့ X20 Plus UD တို့ရဲ့ Spec ပိုင်းကို ကြည့်ရင်တော့အရမ်းကြီးကွာဟာနေတာတော့ မတွေ့ရဘူးဗျ။
Vivo X20 Plus in-screen fingerprint variant would be carryingaprice tag of 3,998 Yuan (~$625). This seems to be possible as the regular X20 Plus was introduced withapricing of 3,498 Yuan (~$546).
Vivo X20 Plus in-screen fingerprint (X20 Plus UD) ကိုတော့ $625 နဲ့ရောင်းချသွားမှာပါ။ X20 Plus စျေးနှုန်းကတော့ $546 ပါ။ Version နှစ်ခုရဲ့ စျေးနှုန်းဟာ $78 လောက်တော့ ကွာဟပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီသတင်းဟာ အမှန် ဟုတ်/မဟုတ် ကိုတော့ မနက်ဖြန်မှာပဲသိရှိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
vivo X20 Plus UD to be officially unveiled on January 24 https://t.co/BC5U85XOSx pic.twitter.com/ntRYCMuQJK
— GSMArena.com (@gsmarena_com) January 22, 2018
Android, New model, Vivo
HTC U11 (Sprint) အတွက် Oreo update ရောက်ရှိနေပြီ!